Abaninzi bayazi malunga nomphumo wokuhlaziya, onokufezekiswa phantsi kwefuthe lokushisa okuphezulu. Izicubu zifudumala yi-fibroblasts, eziphinde zenze i-elastin kunye ne-collagen. I-Collagen iyimisipha yesikhumba! Unoxanduva lokukhenkceka kwesikhumba, kunye ne-elastin, ngokulandelanayo, kwenza ulusu lukhuphe. Nangona kunjalo, ukwenzela ukuba usebenze kwi-fibroblasts, iqondo lokushisa kufuneka liphezulu kakhulu. Kutheni ukutshisa isikhumba kwaye kungabangela ingozi kuyo? Impendulo iyinhlakanipho kwaye ilula.
I-Radiolifting: ingundoqo yendlela
Isixhobo sokuqala se-radiolift senziwa ngasekupheleni kweminyaka engama-80 e-United States. Ngaphambi koku, into ebalulekileyo kakhulu engabonwayo yokupakisha yayiyi-photorejuvenation. Kodwa ukuphakanyiswa okunjalo kufanelekile kuphela kubantu abanesikhumba esikhanyayo. I-Cosmetologists zenzele umsebenzi onzima-ukudala ubuchule obuya kuba bukhulu kwaye bubuhlungu kakhulu njengendlela yokuhlaziywa kwezithombe, kodwa ukukhanya akuzange kusetyenziswe njengesiseko. Ukuphuhlisa ubuchule bokusasazwa kwee-radiyo, izazinzulu zasebenzisa umgaqo we-oven microwave. Ngoko i-apparatus for re-lifting is used. I-chip yafakwa kwi-isikhumba somntu, esasaza amaza emsakazo. I-electrode ye-polar ifakwe kwisixhobo okanye umlenze. Ngale ndlela, isangqa se-electromagnetic sidlula emzimbeni, kodwa ezininzi zezicubu ziyafudumala kwindawo apho i-chip ikhona khona. Inkqubo enjalo ibonise iziphumo ezintle, ezinokubonakala emva kwenkqubo yokuqala. Kodwa kukho iziphene - zitshisa. Ukuthintela ukwakheka kobushushu, ukushisa kwe-chip kwahlulwa ngosizo lwezinto ezipholileyo. Inkqubo yinto enzima kakhulu, kwaye kufuneka iqhutywe kuphela phantsi kwe-anesthesia.
I-CosmetologyAmerica ibalwa kwixesha elide lokutshatyalaliswa kwexesha-iifowuni zokuqala zenza amaza anamandla (300 W). Izixhobo ezalandelayo zinegunya elinamakhulu amahlanu ngamatts, kodwa iingxaki zihlala, ngelanga.
Nangona kunjalo, akukho mntu wayefuna ukuyeka indlela enjalo ethembisayo. Kodwa indlela efunekayo yokuphucula. Ukusetyenziswa kokuthintela isenzo ngokusebenzisa ukunciphisa ama-radiation ukuya kwi-10 ukuya kwi-watts ezilishumi elinesibini uye waphumelela. Kodwa ngoku, ayikho into enokuyenza ngenkqubo enye. Kuba ubuso be-facelift, ngoku kufuneka uhambe lonke ikhosi. Kodwa le nkqubo ibuye ikhululekile kwaye ikhuselekile. Ukuphumelela okulandelayo kwi-rejuvenation yomsakazo yenzelwe iikhamera ze-bipolar, ezikuvumela ukuba ugxininise impembelelo kwindawo ethile ethile yesikhumba ngaphandle kokusabalalisa umzimba wonke.
ukungaphumeleli kwintliziyo, kuba nesigaba sokunciphisa;
izinga lokushisa lomzimba;
Inkqubo kunye nendlela
Izixhobo zakutshanje zixhotyiswe ngamacuphu anexinzelelo phakathi kunye nama-electrode azungeze. Ngethuba le nkqubo, i-vacuum isebenza kwesikhumba kunye nezixhobo zivelisa umtshini we-electromagnetic. Ngaloo ndlela, ukufudumala kwendawo yesikhumba sikhupha. Amagesi e-electromagnetic asebenzisanga kwiamolekyu ze-collagen endala, kwaye iinqununu zithathwe kwiisishu. Kunoko, i-collagen entsha yenziwa kwesikhumba.
Ezinye izazi ze-cosmologists ziqinisekile ukuba i-radiolifting iyakwazi ukubuyisela uphando lweplastiki.Kodwa nayiphi na into, ukuhanjiswa kwe-radiolifting kuya kunceda ukuyeka iiplastiki iminyaka. I-Cosmetologists icebisa le nkqubo kubasetyhini beminyaka yobudala ukususela kwi-35 ukuya kwimi-40 ubudala ubudala, xa kukho ukuguquka okunxulumene neminyaka efana nemibimbi, utshintshe oval. Emva kokuba umfazi ehamba kwinkqubo yekhosi, ulusu luba lukhuni, lukhulu kakhulu, ama-wrinkles ahlanjululwa, ubuso obunqambileyo buqiniswe. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ukuphathwa okunjalo kungenziwa kuphela kwesikhumba somntu, kodwa nakweminye imimandla yomzimba, apho isikhumba siqala ukulahlekelwa i-tonus yayo ngokukhawuleza, umzekelo, ngaphakathi kwamathanga kunye namagxa okanye isisu.
Iinkqubo zokusasazwa ngee-radiation zinamathuba amaninzi. Okokuqala, emva kwenkqubo, i-course of rehabilitation ayimfuneko, ayiyikushiya impawu ngolu hlobo, ayixhomekeke kwisilinganiselo, umzekelo, njengento yokucoca, ekhuthazwa kuphela ehlobo. Ukuba amandla kunye nobude benkqubo bachongwa ngokuchanekileyo, impumelelo iyaqinisekiswa, kwaye inkqubo iya kuba yintlungu kwaye ukhululekile.
Ukulinganiselwa kunye nokungalunganga
Umetodiki radiolifting inokungaphumeleli. Izindlela zanamhlanje azikho umphumo obonakalayo emva kokudlula inkqubo yokuqala. Oogqirha bancomela ukuba baqhube inkambo ethile kwimizuzu yesine ukuya kweyesithandathu kwinkqubo, kunye nekhefu kwi-dvenadel. Inkqubo nganye ikwandisa umphumo wonyaka odlulileyo, kodwa umonde kufuneka ukuba ulinde umphumo wokugqibela. Isiphumo sokugqibela siya kubonakala kuphela emva kokuphela kweenyanga ezintandathu emva kokugqitywa kweenkqubo.
I-Radiolyfting nayo inemiba ethile. Indlela enjalo ayifanelekanga kubantu abanezixhobo zombane, umzekelo, umqhubi weengcamango zentliziyo, kwisiganeko esinjalo, amaza anombane angabangela ukungaphumeleli kwezixhobo ezinjalo. ephosakeleyo. Kodwa kubalulekile ukuba uqaphele ukuba izixhobo ezintsha zokuvelisa izixhobo ezinamandla kakhulu, kwaye zonke iingozi zikhona kunokoqobo.
Kwakhona ngokukodwa ukuthetha ukuba umphumo obonakalayo unako ukufezekiswa kwesikhumba esilungileyo kunye nesikhumba. Amadoda anesikhumba esincinci kunabesifazana, ngoko isondo esinamandla sisona sikhulu somthengi ngenkqubo yokwenza i-radiolifting. Ukuthungula ulusu luyimbopheleleko kunye nemeko esemgangathweni, kuba amagagasi okombane azimisele "amanzi". Ukuba uvela kwindawo yokuphumla, ngoko ngaphambi kokuba uqale inkqubo yeenkqubo, jonga kwiinkqubo zenkqubo yokuphucula isikhumba.
Inzuzo eyimfuneko yokwenza i-radiolifting kukuba ivuselela ngenxa yokukhuthazwa kwemithombo yendalo yesikhumba, kungekhona ngokusungulwa kwezinto zangaphandle kwesikhumba. Oku kuthetha ukuba emva kwexesha elithile emva kwenkqubo akuyi kubakho ukungonakaliswa kwesikhumba.
Iityuba zetyuwa - zilungele ulusu
I-Parfait kunye ne-walnuts nobusi
Ungayilahla njani i-freckles?
Ukuqeqeshwa okunzima kwi Tai Chi
Indlela yokwenza iCherry Jam
Yiyiphi into engenakwenzeka ukwenza okanye eyenzayo kwabasetyhini abakhulelweyo? Icandelo 2
Ziziphi iindlela onokunyusa ngazo amabele akho?